Al-Shabaab oo weeraray Saldhigyo ay ku sugan yihiin Ciidamada Kenya - Awdinle Online
Al-Shabaab oo weeraray Saldhigyo ay ku sugan yihiin Ciidamada Kenya
Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerar ay u adeegsatay Hoobiyaal & qoryaha fud-fudud in ay ay ku qaaday saldhigyo Ciidamada Kenya ay ku leeyihiin Deegaannada kala ah Hoosinogw, Taabto & Degmada Afmadow.
Weerarkaan ayaa dhacay xalay saq dhexe sida Al-Shabaab sheegatayy, waxa uu socday muddo daqiiqado ah, mana soo bandhigin waxyeelo dhankooda gaartay & khasaare ay gaarsiiyeen Ciidamada Kenya.
Warbaahinta Al-Shabaab ayaa daabacday in weerarka oo ka bilawday Hoobiyaal lagu tuuray Xeryaha Askarta kenyanka ah ee dalka ku jooga howlgalka Midowga Afrika AMISOM & Jawaab ay bixiyeen.
Kadib waxaa xigay dagaal toos ah oo dhexmaray Shabaab & Ciidamada Kenya sida hadalka loo dhigay, balse ma sheegin tiro rasmi ah oo dhimasho & dhaawac ah oo wax ku noqday iska hor imaadka.
Dowladda Kenya wali kama aysan hadlin sheegashada Al-Shabaab, sidoo kale Ururka Midowga Afrika oo ay xiran yihiin Koofidooda Cagaaran war kama soosaarin weerarkaan & khasaaraha ka dhashay oo ay ogyihiin.
Askarta Kenya ayaa mas’uul ka ah ammaanka deegaannada DG Jubbaland oo intooda badan ay ku sugan yihiin Gobolka Jubada Hoose, waxa ay gacanta ku hayaan Degmooyinka & Garoomada Diyaaradaha, waxaana la howlgala Ciidamada Jubbaland.
Previous articleDowladda Somalia oo si deg deg ah ugu yeertay safiiradeeda jooga Muqdisho
Next articleDowladda Soomaaliya oo Ciidamo u dirtay degaankii dadka lagu laayay